नेपाली काँग्रेसमा देउवा र पौडेलबाहेक सभापति बन्ने: शेखर कोइराला – kalikadainik.com
नेपाली काँग्रेसमा देउवा र पौडेलबाहेक सभापति बन्ने: शेखर कोइराला
शनिबार, साउन ३२, २०७६ | ११:०६:२० |
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले १४ औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबाहेकबाट सभापति बन्ने ठोकुवा गरेका छन् । आज विशेष कुराकानी गर्दै नेपाली काँग्रेस यथास्थितिमा चल्न नसक्ने भएकाले नेतृत्व परिवर्तन अवश्यम्भावी भएको बताए ।
“अब नेपाली काँग्रेस जसरी चल्दै आएको छ त्यसरी चल्न सक्दैन,” डा. कोइरालाले भने, “शेरबहादुरजी र रामचन्द्र पौडेलजीबाहेकबाट सभापति बन्नेछन् ।” सभापतिका लागि आफूले पनि उम्मेदवारी दिनेबारे सरसल्लाह गरिरहेको बताए । तर, उम्मेदवारी घोषणा गरिनसकेको बताए । पार्टीका साथीहरुसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाई थियो ।
समयमै महाधिवेशन नहुँदा पार्टीलाई असर पर्ने बताए । संसद र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्को प्रसंगमा कास्की-२ मा वामदेव गौतम उम्मेदवार भए हराइदिने बताए । गौतम उम्मेदवार भए नेपाली काँग्रेसलाई जित हासिल गर्न सजिलो हुने दाबी गरे । उनले भने, “वामदेवजी उम्मेदवार भए झन् हामीलाई जित्न सजिलो हुन्छ ।” सरकार बदनाम भइसकेकाले चुनावमा काँग्रेसले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने बताए ।